TOMBAN’EZAKY NY TAONA 2017 : Nidoka tena ho nahavita be ny Filoha Hery Rajaonarimampianina
Ny faran’ny herinandro lasa teo, tao anatin’ilay fandaharana fotoam-bita izay fanaon’ny Filoham-pirenena hitafana mivantana amin’ny vahoaka no nanaovany tomban’ezaka ny zava-bita nandritra ny taona 2017 lasa iny. 2 janvier 2018
Io no fandaharana farany tamin’iny taona iny, izay nolazainy fa hoentina hanaovana jery todika ny lasa ary hakana lesona amin’ny ho avy. Tsy nahita afa-tsy ny lafi-tsarany anefa ny filoha tamin’izany ary miendrika ho fandokafan-tena ho isan’ny tena nahavita be teto amin’ny firenena ny fanambaràna nataony tao anatin’ilay fandaharana. Toa tsy mba tsapany mihitsy hoe tsy sarimihetsika intsony fa tena iainan’ny sarambabem-bahoaka ny fahantrana lalina misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao.
Anisany noresahany tamin’izany, ohatra, ny vidim-bary izay tena mampikaikaika ny olona ankehitriny, foto-tsakafon’ny Malagasy anefa tsy taka-bidy intsony. Tsy mbola nisy mihitsy ny vahaolana hentitra sy mazava noraisin’ny filoha hatreto na dia efa hadiva hifarana aza ny fotoam-pitondrany, tsy misy afa-tsy ny fampanantenana tahaka ny mahazatra hatrany no re teny am-bavany izay efa tsy inoan’ny vahoaka intsony sady kobaka am-bava izay tsy mety tanteraka hatreto.
“Ao anatin’ny fanarenana ny takaitra izay navelan’ny haintany sy ny rivodoza Enawo isika. Niantraika mafy tamin’ny famokarana izany, vokatr’izany dia mihena ny tahirim-bary eto an-toerana ka niakatra ny vidiny. Nanafatra vary avy any ivelany mihoatra noho ny tokony ho izy ny mpandraharaha ka antenaina fa hidina miandalana ny vidiny mandra-piakatry ny vokatra manaraka”, io no nambaran’ny Filoha. Raha ny zava-misy eny an-tsena anefa dia toa mbola miziriziry eo amin’ny 700 Ariary hatrany ny kapoakan’ny vary raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Hatreto aloha izany dia mbola tsy misy fahatanterahany fa mbola mijanona ho nofinofy fotsiny ihany ity fidinan’ny vidim-bary ity izay efa andrandrain’ny vahoaka fatratra mihitsy. Nilaza ny filoha fa na teo aza izany olana izany dia voatazona ihany ny fitombon’ny harin-karena tamin’ity taona ity saingy kosa nohamafisiny fa tsy mbola nisy fiantraikany tamin’ny isan-tokantrano izany. Ity farany dia ambaran’ireo mpahay toe-karena fa mitovy amin’ny tsy misy ihany rehefa tsy hita izay vokany azo tsapain-tanana miantefa mivantana amin’ny fiainam-bahoaka.
Maika tamin’ny tsy laharam-pahamehana
Raha atao bango tokana dia anisany tena nitondran’ny vahoaka Malagasy fahoriana iny taona 2017 iny. Iny taona lasa iny no nahitana izany kapoakam-bary mahatratra hatrany amin’ny 1500 Ariary izany, ny vidin-tsolika tsy mitsaha-miakatra ary manginy fotsiny ireo entana fampiasa amin’ny fiainana andavanandro. Nanantena ny hahazo vahaolana mivaingana avy amin’ny fitondram-panjakana anefa ny vahoaka saingy hatreto dia mbola tsy misy izany.
Any amin’ny tsy laharam-pahamehana hatrany no maha- maika ireo olon’ny fitondrana. Anisan’izany, ohatra, ny fifikirana amin’ny seza sy fikasana hanova ny lalàmpanorenana izay ahian’ny maro fa hitondra korontana eto amin’ny firenena. Ankilany anefa nisy ny fampandrosoana, azo lazaina ho nibosesika ireo famatsiam-bola avy any ivelany saingy tsy hitan’ny aty vilanin’ny vahoaka madinika izany. Ohatra tamin’izany ny fanamafisam-piaraha-miasa teo amin’ny kaompaniam-pitaterana Air Madagascar sy Air Austral, eo ihany koa ny fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato sy any Nosy Be.
Nidoka tena fatratra ny Filoha nanoloana ny tatitra izay nolazainy fa navoakan’ny banky iraisam-pirenena izay manambara fa “efa tena mandroso isika”. Mampametra-panontaniana ny olom-pirenena mpanara-baovao ihany hoe, mandroso mankaiza dia mandroso amin’ny inona ny firenena malagasy ?
Satria raha ny zavatra hita amin’ny fiainana andavanandro dia tsy ahitana soritra izay fampandrosoana izay mihitsy. Nandritra io fandaharana fotoam-bita farany io dia nireharehan’ny Filoha fatratra ireo fotodrafitrasa izay nolazainy fa mirindra sy maharitra notokanana tamin’iny taona lasa iny ary ireo izay mbola hotokanana amin’ity taona vaovao ity. Tao anatin’izay dia niraradraraka sahady ny fampanantenana izay santatry ny fambaboana fom-bahoaka mialoha ny fampielezan-kevitra. Nambarany fa hamboarina ny seranan-tsambon’i Toamasiana izay hiaraha-miasa amin’ny fanjakana Japoney ary hamboarina ihany koa ny lalana mampitohy an’Ambanja sy Vohémar. Ny mbola andrasan’ny rehetra fatratra anefa hatramin’izao dia ny fanatanterahana ilay teny fampanantenana tamin’ny tenany vao hilatsaka hofidiana hoe “ao anatin’ny telo volana dia ho foana ny delestazy”. Hatramin’izao mantsy toerana sy faritra maro no mbola misedra olana noho io fahatapahan-jiro io.
Ny alahady 31 desambra izay andro namaranana ny taona 2017 dia nisy ny kabary nataon’ny Filoham-pirenena, nandritra ilay fotoam-pivavahanana noentina nanaovam-belona iny taona 2017 iny. Tamin’izany no niantsoantso mba hisian’ny fihavanana, fifankatiavana eo amin’ny rehetra ho amin’ity taona vaovao 2018. Matetika dia fomba fitenin’ny filoha ny fidradradradrana fihavanana kanefa raha ny jery todiky ny politika tamin’iny taon-dasa iny dia ireo olon’ny fitondrana mihitsy no tena anisany namboly korontana teto amin’ny firenena.
Ohatra mivaingana tamin’izany ny fihantsiana ady nataon’izy ireo tamin’ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc. Ity farany dia tsy nahita rirany mihitsy raha nikasa hanao hetsika hankalazana ny tsingerin-taona nijoroan’ny antokony. Ankoatr’izay vao tsy ela ihany no nisian’ilay fifandrangitana teo amin’ny filohan’ny antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao sy ny tenany izay nambaran’ireo mpanara-baovao fa vaky tanteraka ny ady eo amin’ny roa tonta.
Araka izany, miankina feno amin’ny mpitondra am-perin’asa ny hisian’ny fihavanana sy ny fifankatiavana eto amin’ny firenena. Nandritra an’io lahateny nataony io dia naniry mafy ny hanjakan’ny fandriampahalemana, fahasalamana ho an’ny isan-tokantrano sy ny vahoaka tsy ankanavaka ny tenany kanefa heverina fa tsy tonga ho azy izany raha tsy misy ny ezaka ataon’ireo mpitondra.
Araka ny angom-baovao natao moa dia samy miandrandra an’izany fandriampahalemana izay avokoa ny olona, indrindra ny mba hisian’ny vahaolana amin’izao fidangan’ny vidim-piainana izao. Nambaran’ireo olom-pirenena nanontaniana fa Filoham-pirenena hiasa avy hatrany sy hahavita hampidina ny fidangan’ny vidim-piainana no ilain’izy ireo fa tsy ireo mpanao kobaka am-bava fotsiny.
TOMBAN’EZAKY NY TAONA 2017
2018-01-04 09:50:38 par bordeaux 33000
Zah ty koa nahay adresse tokony azahoan i rjao il courier, naharegny taminah io. Efa tsis ambara. Miandry 2018 fifidianana madio zahay MBA andraisan i rajoelina fitondrana fa efa sahirantsaina i Rjao fa efa dernièr moment São fa efa mahatsapa tena a cent pour cent anie i rajao io fa horesy am fifidinana rah atao mangarangara io e. Efa au dernier moment São hanova lalampanorenana zay juste met y ho an i hvm nef àNie ka lalam panorenana nifidin olona mpanao politique maro anime izy tiany laniana am heviny samirery il fa tsy lalam panorenana nolanian i minisitra NY vola TM tetezamita e.mila esorina il mpitondra vampire NY franc maçon il zalah e.